Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! मौसमी रुघाखोकी र कोरोनालाई कसरी चिन्‍ने ? बच्‍ने उपाय के ?
मौसमी रुघाखोकी र कोरोनालाई कसरी चिन्‍ने ? बच्‍ने उपाय के ?
अन्जु डिम्दोङ तामाङ सोमबार, भदौ ७, २०७८
अहिले मौसमी रुघाखोकी (मौसमी फ्लु)ले पनि नागरिकलाई सताइरहेको छ । कोभिड–१९ र फ्लुको धेरै लक्षणहरु मिल्दाजुल्दा भएकोले आफ्नो स्वास्थ्यमा आएको समस्या पहिचान गर्न नसक्दा नागरिक त्रासमा छन् । मौसमी रुघाखोकीले धेरैजसो बालबालिकालाई सताइरहेको छ । मौसमी रुघाखोकी र कोभिडलाई कसरी चिन्ने, यसको पहिचान, उपचारबारेमा हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौं ।
नागरिकले मौसमी रुघाखोकी (सिजनल फ्लु) र कोभिड–१९ लाई कसरी चिन्ने ?
कोभिड–१९ र मौसमी रुघाखोकी फ्लुलाई छुट्याउन त्यत्ति सहज छैन । सर्ने तरिका र प्रारम्भिक लक्षणहरु पनि एकअर्कासँग मिल्दाजुल्दा नै छन् । विगत डेढ वर्षदेखि नेपालमा कोभिड भनेपछि मानसपटलमा डरत्रास भएको हुँदा लक्षण रुघाखोकीकै भए पनि धेरैलाई न कोभिडनै हो कि भन्ने र डराएको पनि देखिएको छ ।
मैले डराउनु पर्ने थप कारण के देखे भने, आफू संक्रमित भएपछि परिवारका अन्य सदस्यहरु, साना बालबालिका, वृद्धा बुवाआमाहरुलाई अझ असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लिएको देखेको छु । चिन्तै चिन्ताले गर्दा मौसमी रुघाखोकी लागेको भए तापनि तनाव हुन्छ । लक्षणको आधारमा छुट्याउन गाह्रो हुने भएको हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि परामर्श र उपचारमा त्यत्ति सहज हुँदैन ।
हामीले कोभिड र मौसमी रुघाखोकीलाई छुट्याउनु पर्दा जस्तो उदाहरणका लागि कोही व्यक्तिसँग भेट भएको ४ दिनमा रुघाखोकी, ज्वरो आएको लक्षण देखिएयो भने त्यो मौसमी रुघाखाकी (सिजनल फ्लु) हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ । बढी सम्भावना भन्नुको तलब कोभिड हुँदै हुँदैन भन्न खोजेको होइन मैले सम्भावनाको कुरा गरेको हो । यस्तै कोभिड–१९ सामान्यतया ५ देखि ६ दिनमा लक्षणहरु देखिन्छ । कसैलाई एक–दुई दिनमा पनि देखिन सक्छ ।
एक पटक फेरि जानकारी गराउँछु, फ्लुको कुरा गर्नुपर्दा धेरै व्यक्तिमा भने कसैसँग भेट भएको ४ दिनमा ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने लक्षणहरु देखापर्न सक्छ भने कोभिडमा कोभिडको संक्रमतिसँग भेट भएको ५ देखि ६ दिन माथि लक्षणहरु देखा पर्न सक्छन् । तर यो कुरा सबैमा लागू नहुन पनि सक्छ । धेरैजसोको हकमा मैले यो कुरा गरेको हो भने कसैलाई एक दुई दिनमा पनि देखा पर्न सक्छ । अर्थात् ज्वरो आउने, रुघा लाग्न सुरु हुन्छ ।
कोभिड–१९ को लक्षणमा स्वाद गन्ध, थाह नपाउने हुन्छ । यो कुराको धेरै नागरिकले अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ ।
मौसमी रुघाखोकी (सिजनल फ्लु)को बढी जोकुन समूह पर्छन् ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने मौसमी रुघाखोकीले धेरै त बालबालिकालाई सताएको देखिन्छ । भोलि अर्को परिवर्तन हुन पनि सक्छ, नेपालको कोभिडको अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बालबालिकालाई व्यापक समस्या भएको पाइँदैन । अब आउने दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न तर अहिलेसम्म बालबालिकालाई मौसमी रुघाखोकीले बढी समस्या ल्याएको देखिन्छ । भोलि यो ट्रेन्ड परिवर्तन पनि हुन सक्ला तर आजसम्म देखिएको कुरा भन्नुपर्दा मौसमी रुघाखोकीले बालबालिकालाई नै बढी सताएको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ र सिजनल फ्लु एउटै व्यक्तिलाई देख्न सक्छ र ?
यो दुबै एउटै व्यक्तिलाई हुने सम्भावना छ । त्यो मैले देखेको पनि छु । कोभिड र मौसमी फ्लु दुबै भएको मैले भेटेको व्यक्तिले कोभिडको खोप लगाउनु भएकोले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा खासै ठूलो समस्याहरु देखिएको छैन । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर आगामी दिनमा फ्लु र कोभिड दुबै संक्रमण भएको खण्डमा के कस्तो अवस्था आउँछ । हामीले कसरी उपचार गर्ने अथवा अहिले हामीले गरिरहेको उपचारमा फरक गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा आगामी दिनमा नजिकबाट नियाल्दै जानुपर्छ र त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
उपचार किन आवश्यक पर्छ भन्दा फ्लु एकदमै सजिलो भन्न खोजेको होइन । मैले झन् कोभिड हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ र डेल्टा भेरिएन्टका कुराहरु आइरहेका छन् । यो दुबैलाई छुट्याउन सकेमा उपचार र परामर्श दुवैमा सहज हुने भएकोले पहिचान गरेर उपचारमा लाग्दा राम्रो र जरुरी छ । मौसमी रुघाखोकी हो कि कोरोना भनेर छुट्याउन लक्षणहरु पर्याप्त नहुन सक्छ । परीक्षण विधि नै अन्तिम डिसिजन गर्न सजिलो हुने भएकोले यो नै उत्तम उपाय पनि भन्ने गरेका छौं । थाह पाउन दुबैका पीसीआर अथवा र्‍यापिड टेष्टबाट गर्न सकिन्छ ।
कोभिड र मौसमी रुघाखोकीले उपचारमा ढिला हुँदा ल्याउने समस्याहरु के के हुन् ?
दुबै फोक्सोसँग सम्बन्धित छ । कोभिड र फ्लु श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भएकोले फोक्सोमा निमोनिया हुन्छ । तर कोभिडले पछि गएर विभिन्न अंगमा रगत जम्ने समस्याहरु देखाउछ भने पछि त्यो व्यक्तिको निधनसम्म हुन सक्छ । अझ कोभिडले विभिन्न अंगलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने भएकोले अलि धेरै जटिल अवस्था देखिन्छ ।
कोभिडको पनि अहिले भ्याक्सिन लगाउने क्रम चलिरहेको छ भने फ्लुको पनि भ्याक्सिन छ र लगाउन सकिन्छ । फ्लुको पनि जोखिम समूहमा पर्ने रहेछ भने उहाँहरुलाई हामीले फ्लु विरुद्धको औषधि धेरै पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेका छौं भने औषधि पनि नेपाल सरकारले नि:शुल्क गर्दै आइरहेको छ ।
बच्न फ्लुको भ्याक्सिन जन्मेको ६ महिनादेखि माथि जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि लगाउन सकिन्छ । फ्लु बाट बच्न मास्क प्रयोग गर्ने, खोक्दा रुमाल अथवा बाउलीले मुख छोपेर खोक्ने । यिनै कुराहरु बच्ने उपायहरुमा आउँछन् । मौसमी रुघाखोकीको सुरुवातको अवस्थामा घरमै आराम गर्ने श्‍वास प्रश्‍वासमा समस्या देखिएको खण्डमा चिकित्सकको सम्पर्कमा आउनु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८, ०८:५६:००